ဖိုင်ဘာကလတ်ခေါင်မိုး၊ / ဖိုင်ဘာကလတ်ခေါင်မိုးပြား၊ / အလင်းရောင်ခေါင်မိုး
B.P. ဖိုင်ဘာကလတ်ခေါင်းမိုး (အလင်းရောင်) B.P. က ကုန်တိုက်၊ အဆောက်အအုံ၊ စက်ရုံ၊ ရေကူးကန်၊ ကားဂိုးဒေါင် (သို့) နေရာများတို့အတွက် Sun-Lite , Moon-Lite , Star-Lite တို့အဖြစ် အသုံးပြုသည်။
1. အဆောင်အအုံသို့ နေရောင်ကောင်းမွန်ပေးနိုင်သည်။
2. မလေးမလံ၊ သံချေးမပြုပါ။
3. အပူ 150 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မနည်းထက် ခုခံနိုင်သည်။
4. Hydrochloric acid, Sulfuric acid, Caustic soda, Acetic ammonia တို့အဖြစ် အနည်းအက်ဆစ်နှင့် ဘေ့စ်အမျိုးများတို့ကို ခုခံနိုင်သည်။
5. ပုံမပြောင်းပါ၊ ခိုင်မာသည်။
6. ပြောင်းလွယ်ပြင်လယ်မှု သံခေါင်မိုးပြားးနှင့်အတူ တူညီသည်။
1. အလင်းပျံ့ဆင့်အတန်း ခေါင်မိုးပြားတိုင်းကို တူတူညီညီရှိသည်။
2. အတွင်းအပြင်တွင် အမေရိကာနိုင်ငံမှ Bondable Polyester Film 20 နှင့် အင်္ဂလိပ်နိုင်ငံမှ Heat Sealable Polyester Film တို့ဖြင့် လိမ်းခဲ့ပြီးပါက Chopped Strand Mat ထူးခြားသည့်ဖန်မျှင် ဖိုင်ဘာဖြင့် ထည့်သွင်းသည်။ ထို့အပြင် အရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကာကွယ်ဆေးပါသည့်ရေစင်ရှိသည်။
3. ကုန်အသက်ချိန်ကာလကြာကြာရှည်ရှည်ပါသည်။ အရောင်မပြောင်းမည်ဖြစ်သည်။ ပင်လယ်နှင့် အက်ဆစ်-ဘေ့စ်ပါသည့်စက်ရုံအတွင်း အနီးနီးတပ်စင်နိုင်ပါသည်။
4. ကျိုးပဲ့သောအကြောင်းတရားများဖြစ်ခြင်းမပြုပါ၊ ပျက်စီးလွယ်ခြင်းကိုလည်းမပြုပါ၊ ဖိအားတွေအများကြီးကိုင်တွယ်နိုင်ပါသ်ည။ တုန်ခါမှု (သို့) ထိတ်လန့်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ရာသီဥတုအပြောင်းအလဲကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
5. အချင်းဝက် 12 မီတာထက် (သို့) ဖောက်သည်၏လိုအပ်ချက်အလိုက် အကွေးမဖြတ်မည် သတ်မှတ်ထားသည်။
**အသုံးပြုသည့်ခေါင်မိုးပြားအရေအတွက်တို့အတွက် ဒီဇိုင်းအင်ဂျီနီယာ၏လမ်းညွှန်းချက် (သို့) လိုအပ်ချက်အလိုက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ **
ဖိုက်ဘာမှန်ရေထိန်းဘုံး Food Grade ကုန်ပို့လွှာရယူရန်